Tsikerain’ny Vondrona Indoneziana Ho Tsy Mifanaraka Amin’ny Mahasilamo Ny ‘Oliravina Izao Tontolo Izao’ · Global Voices teny Malagasy
Vakio amin'ny teny فارسی, Français, Español, English
Mpanao fihetsiketsehana miozolomana mitazona sora-baventy manohitra ny fanatontosana ny Oliravina izao tontolo izao 2013 ao Jakarta. Saripikan'i dharma wijayanto, Copyright@Demotix (9/3/2013)
Nahatery ny governemanta hanaisotra ny fanatontosana ny fifaninanana hatsaran-tarehy Oliravina izao tontolo izao 2013 ao an-drenivohitra Jakarta ny fihetsiketsehana manerana ny firenena nokarakarain'ny vondrona islamika indoneziana tarihin'ilay antoko mampiady hevitra Front Pembela Islam (FPI). Mbola hotontosaina amin'ny 28 septambra ihany ny lanonana saingy any Bali, nosy izay ny Haindò kosa no maro an'isa ao aminy ny toerana hanatontosana izany.
Arangarangan'ny vondrona miozolomana tahaka ny FPI fa ‘tsy Islamika’ ity fifaninanana Oliravina Izao Tontolo Izao ity. Nandrahona ry zareo fa horavàny ny lanonana ary hanatontosa hetsi-panoherana maro kokoa raha mamela io fifaninanana io hitohy ny governemanta. Indonezia moa no firenena be Miozolomana indrindra manerana ny tany.
Ho setrin'ny hetsi-panoherana dia nampanantena ny mpikarakara ny Oliravina Izao Tontolo Izao fa hosoloina sarongs Balinezy ny bikinis rehefa tonga eo amin'ny seho miompana amin'ny eny amin'ny tora-pasika. Saingy tsy naharesy lahatra ny mpitarika miozolomana izay mbola niantso ny mpanaraka azy hanohitra ny lanonana izany tolo-kevitra izany.
Diso fanantenana tamin'ilay hetsi-panoherana i @riotuasikal ary mitsipaka ny fomba fijery tery ao amin'ny kolontsaina Indoneziana:
Fa inona marina tokoa ny budaya Indonesia (kolontsaina Indoneziana), ilay mitafy kebaya fa tsy bikini ve, ilay miteny bahasa Indonesia fa tsy anglisy ve, ary mandihy kecak fa tsy ballet ve? Avy eo isika mitsaratsara ny vehivavy ho tsy Indoneziana noho ny fitafiany ‘débardeur’, ary fa angaha tsotra tahaka izany ny budaya? Tsia kosa e, indraindray isika tsy mahatsapa fa tsorintsika ho amin'ireny sariohatra ireny monja ny soatoavintsika ambony. Raha manao izany isika dia miomàna amin'ny fanaovana ny sariohatry ny ady.
Tohina i Tsara ny Fiainana (Life is Beautiful) tamin'ny fahitana nireo mpifaninana Oliravina mianjaika ny fitafim-pirenena Indoneziana nandritra ny sehom-panokafana:
Nijery ny sombintsombin'ny seho, edinedina Nusantara, aho ary nieritreritra fa kihanihany daholo ireny. Ahoana no “hanerena” ny olona hianjaika ny fitafim-puirenentsika. Heverina mba hotafiana amim-pireharehana iny, saingy jereo ny jonitr'ireo mitafy azy ireny. Ampitahao amin'ny edinedina mahazatra rehefa samy mianjaika ny fitafim-pireneny nentin-drazana avokoa ny mpifaninana rehetra, tsy hitantsika ny endrika falifalin'ny mpifaninana rehefa mitafy ny an'ny fireneny ry zareo
Nampahatsiarovin'i Randomness Thing tamin'ny mpanao fihetsiketsehana fa firenena lahika i Indonezia:
Tsy firenena Islamika i Indonezia. Mazava ny lazain'ny lalampanorenana momba izany ary raha ny marina dia misy fivavahana isan-karazany eto amintsika: Islam, Kristianina, Katolika, Haindò, Boddha, ary ny hafa. Izay mety ho “haram” aminao tsy voatery mihatra amin'ny hafa.
Ny fanerenao manao fahirano mandeha irery dia fihetsika tsy fahazakàna ny hafa satria miharihary fa tsy misokatra hiady hevitra amin'ny olona hafa ianao
Notsikerain'ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona ho porofo hafa amin'ny fiakaran-danjan'ny mpitari-pivavahana tsy mahazaka ny fisian'ny hafa ao amin'ny governemanta ny fanapaha-kevitra hanova ny toerana hanatontosana ny fifaninanana. Saingy nandrisika ireo vondrona ireo hitsikera ihany koa ny hatsaran-tarehin'ny mpifaninana i Angry Magpie:
Raha izaho manokana dia ho gaga aho raha manohana ny Oliravina Izao Tontolo Izao ny Human Rights Watch – tsy resaka arahin'ny vondrona mpandala ny zon'olombelona loatra ny fampitaha hatsaran-tarehy. Raha izay, aleoko lavitra mahita ny HRW mitsikera ny fampitaha hatsara-tarehy sady mifikitra hoe tsy tokony ho mora voatsindrin'ny vondrona radikaly.
Tian'i William Pesek ho any amin'ny lohahevitra hafa ny ‘fahatezerana diso toerana’ :
Ny fanontaniako, nahoana no misy io fahatezerana diso toerana io ? Aiza ny fahatafintohinana eo amin'ny lafiny kolikoly tsy fampiseho masoandro, izay mitroka ny harem-pirenena sy ny hery iveloman'ny Indoneziana 115 tapitrisa mandray vola latsaky ny $2 isan'andro ? Aiza ny sora-baventy manameloka ny politika manao izay mahatonga ny Ropia ho vola marary indrindra ? Maninona raha mba miray saina isika mitaky fandraisana andraikitra sy mangarahara eo amin'ny fitantanan-draharaha bebe kokoa avy amin'ny mpitondra antsika?
Nana Bali manamarina fa faly ny mponina any Bali amin'ny fanatanterahana any amin'ny nosin-dry zareo ny lanonana:
Mandritra izany fotoana izany, tony, milamina i Bali ary tsy misy olona mieritreritra fa hitondra zavatra ratsy ho anay ny fifaninanana
Indreto ny sasantsasany amin'ny fihetseham-po ao amin'ny Twitter:
“…ny hafatra tokana eo ampandefasana amin'izao fotoana izao amin'izao tontolo izao dia hoe mihamaka an-tendrony ny Islam ao Indonezia”
Tsy ny Indoneziana rehetra RT @AlArabiya_Eng: ‘Tontolo Miozolomana: Manana ny valiny atao amin'ny Oliravina izao Tontolo izao ny Indoneziana
Izany hoe nolazain-dry zareo fa fifaninanan'ny mpivaro-tena ny Oliravina Izao Tontolo Izao. Tsy azoko an
Raha tian'ny FPI ny hanasa ny fahotan'i Bali dnoho ny Oliravina Izao Tontolo Izao, Maninona raha tsy natomboky ry zareo tamin'ny trano fandihizana aloha ? Tsy azoko
Lanonana hanoloana izany ny fanatontosana fifaninanana hatsaran-tarehy Muslimah World izay nomena anarana ho “Setriny ataon'ny Islam amin'ny Oliravina izao tontolo izao”. Notontosaina tao Jakarta ny fifaninanana izay hanaovan'ny mpifaninana tsianjery ny Korany mandritra ny seho. Takiana ny fitiavam-bavaka sy ny fahaizana ary ny fahaiza-mitondra tenan'ireo mpifaninana.